I-136 Imibuzo ebabazekayo yokuBuza isoka lakho - Ukuthandana Conversation Topics
I-136 Imibuzo ebabazekayo yokuBuza isoka lakho
Ngaba uyazi, kukho imibuzo ekufuneka uyibuze kwisithandwa sakho ukuba singaneli nje ukuqinisa ubudlelwane bakho kodwa ukongeza ulonwabo. Ngoku ka U-Leslie Becker-Phelps, i-Ph.D. kwiWebMD, ukwabelana ngeengcinga zakho kunye neemvakalelo kubalulekile ekwakheni ubudlelwane obuhlala buhleli. Nokuba ulwalamano lwakho lutsha kraca, okanye benikunye kunye okwethutyana, zama imibuzo emnandi ukubuza isoka lakho kwaye nibe nencoko enentsingiselo.
Imibuzo yokubuza isoka lakho elitsha
Ukufunda konke onakho malunga nemvelaphi yesoka lakho kuya kukunika ukuqonda okungcono ukuba ungubani. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba ucinga ukuba ubudlelwane bunokubanakho ukuhlala ixesha elide, nantsi ke leuhlobo lwemibuzo ekufuneka uyibuzeisoka elinokubakho okanye umfana omtsha.
ukuqala njani ukuhlangulwa kwenja
10 Izimvo Dating Creative
Igalari yeeNgcinga eziGqibeleleyo zothando lweMvelaphi
Uvela phi? Uhlalaphi kwakhona? Yeyiphi eyona ndawo uyithandayo kwaye ngoba?
Babunjani ubuhlobo babazali bakho?
Babunjani ubuhlobo bakho nabazali bakho?
Ngaba uziva ngathi bayaphathwa abazali bakho?wena nabantakwenuthe same or bekukho ukukhetha?
Zeziphi ezinye zeenkumbulo ozithandayo zobuntwana?
Sesiphi esona sifundo usithandayo esikolweni kwaye ngoba?
Ngaba zikhona iingxaki zempilo ezenzeka kusapho lwakho?
Yeyiphi eyona nto inobubele owakhe wayenzela umntu?
Yeyiphi eyona nto intle umntu ayenzelwe yona?
Ngaba usondele kumalungu osapho lwakho olongezelelweyo?
Zeziphi ezinye zezinto eziphambili ezenzekileyo kwixesha lakho elidlulileyo ocinga ukuba zinegalelo elikhulu kubuntu bakho namhlanje?
Zeziphi ezinye izinto zobuntwana bakho ongathanda ukuphucula kuzo umntwana / abantwana bakho?
Ndixelele ngesilwanyana sasekhaya osithandayo.
Ngaba ubunabahlobo abaninzi njengomntwana, okanye ubenabo nje abambalwa abalungileyo?
Uchithe njani ikhefu lakho lasehlotyeni?
Yayingubani iqhawe lakho ekukhuleni kwakho?
Imibuzo eyonwabisayo yokubuza isoka lakho
Xa ubudlelwane bakho busesentsha, kumnandi ukwazi iziseko ezingenangqondo zezinto ezenza ukuba umntu wakho aphawule. Nguwuphi umbala owuthandayo? Kukuphi ukutya akucekisayo? Ngaba angakubetha kumdlalo weMonopoly? Nantsi imibuzo emnandi, emnandi ukubuza umfana wakho.
Ukuba unokuchitha usuku nomntu odumileyo, ophilayo okanye ofileyo, ibiya kuba ngubani?
Uthini umdlalo webhodi owuthandayo?
Chaza igama elinye.
Ndichaze ngegama elinye.
Ungahamba uyokuthenga iimpahla okanye uthenge izihlangu?
Enye intombazana ikubetha phambi kwam. Ungayiphatha njani? Kuthekani ukuba bendingekho?
Leliphi elona lungu lomzimba ulithandayo?
Yeyiphi ingoma ekukhumbuza ngam?
Ngaba ucinga ukuba sidibene ngaphambili kwiubomi bangaphambili?
Ngubani umntu wakho odumileyo?
Yeyiphi eyona nto uyinqaba sowakha wayitya?
Yintoni eyona nto ingumnqa owakha wayitya wayithanda?
Ungandixelela ngelona xesha lakho lihlazo?
Yeyiphi impahla oyithandayo?
Ukuba ungangomnye umntu ngosuku, ungakhetha bani?
Ukuba ubunehashe, yintoniIgama elihlekisayoungayinika?
Ucinga ntoni ngemiboniso yothando esidlangalaleni?
Chaza indlu ophupha ngayo.
Uthini umsebenzi wakho wephupha?
Ukuba unosuku olubi, ndingakonwabisa njani?
Xa ugula, uyathanda ukuba nomntu okuhoyileyo, okanye ukhetha ukushiywa wedwa de ube ungcono?
Nguwuphi umdlalo owuthandayo?
Nguwuphi umdlalo ongasoze ufune ukuwubukela?
Ukuba ulahlekile, ngaba ubuza indlela?
Chaza iholide efanelekileyo.
Chaza eyona mpelaveki ifanelekileyo.
Yiyiphi idizethi oyithandayo?
Ngaba ukhetha ikofu okanye iti?
Unokwenza ntoni ukuba ngephanyazo andikwazi ukuthetha ulwimi lwakho?
Nguwuphi umsebenzi wasekhaya ongawaziyo ukuba ungayenza njani?
Loluphi olunye uhlobo lomsebenzi wasekhaya ongathandiyo, okanye ubuncinci ukumelana nawo, ukwenza?
Ukuba besikwiqela elithile ethekweni kwaye sixelelwe isiqhulo esoyikisayo ekungekho mntu uhlekisayo, ubunokwenza ntoni?
Ngubani iqhawe lakho?
Yintoni eyona ncwadi uyithandayo?
Leliphi iphephancwadi olithandayo?
Uchitha ixesha elingakanani kwinethiwekhi yokuncokola ngeveki?
Ungandixelela ukuba ndine lipstick emazinyweni am okanye iinwele zam zime nkqo?
Ukuba uphumelele ilotto, ungathini ngemali?
Imibuzo ebalulekileyo onokuthi uyibuze
Imibuzo eyonwabisayo inceda ukuba incoko iqhubeke, kodwa uya kufuna ukungena ngakumbiimicimbi enzuluekugqibeleni. Eziimibuzo enzulu yobudlelwaneiya kukunika umbono ongcono malunga nembali yobudlelwane nesoka lakho kunye nokucebisa malunga nendlela oluya kuphuma ngayo ulwalamano lwakho.
Buphele njani ubuhlobo bakho bokugqibela?
Ingaba wena ne ex yakho nisengabahlobo?
Mangaphi amaqabane owabelana nawo ngesondo?
Ngaba uzibeka emngciphekweni we-STD ngokutsiba ukhuseleko?
Ngaba ukhe wavavanyelwa ii-STD / HIV?
Ngaba uya kukulungela ukuya kuvavanyo kwakhona ngaphambi kokuba sibandakanyeke ngakumbi?
Ungayiphatha njani xa ucinga ukuba omnye umntu uyandibetha?
Uhlangabezana njani noxinzelelo?
Ngaba unayoimikhwa emibiNdifanele ndazi malunga?
Yeyiphi eyona nto imbi sowakha wayenza?
Wakhe waphula umthetho?
Ungayiphatha njani xa uphulukana nomsebenzi?
Ungayiphatha njani xa ndiphulukene nomsebenzi, kwaye sihlala kunye kwaye sabelana ngeendleko?
Ngaba uyakwazi ukulawula umsindo?
Ngaba uyathanda ukuhamba okanye ungathanda ukuhlala ekhaya?
Ukulungisa njani ukungavisisani?
Ngaba ucinga ukuba amadoda nabafazi banokuba ngabahlobo beplaton?
Ngaba ucinga ukuba kulungile ukuba amadoda nabafazi abakubudlelwane obahlukeneyo baye kuphunga ikofu okanye isidlo sasemini kunye?
Yintoni into oyenzayo enokubangela ukuba ndikuthandabuze ukunyaniseka kwakho?
Zithini ezinye zezimvo zakho zokugcina ulwalamano lomelele ekuhambeni kwexesha?
Ucinga ntoni ngephupha lam lokuba ngu ______? (Gcwalisa injongo yakho, njengombhali wenoveli, inkwenkwezi yekaraoke, okanye ubuntu beTV.)
Ngaba ucinga ukuba kulungile ukuba abantu babonise abanye malunga nabanye babo ababalulekileyo, okanye ngaba ucinga ukuba kukungabi nantlonelo ngokupheleleyo kwaye izikhalazo kufuneka zigcinwe kubudlelwane?
Xa wohlukana nomntu, wenza njani?
Loluphi olona hlaselo lakha lubi kuwe? Kutheni kwakukubi kangaka?
Zithini iingcinga zakho ngomtshato?
Zithini iingcinga zakho ngoqhawulo mtshato?
Yintoni ocinga ukuba ukukopa, ngaphandle kokucacileyo?
Ngaba ukhululekile ukuthetha malunga nokuba ubudlelwane bethu buya phi?
Ukuba bendinokunyuselwa kwaye kunyanzeleke ukuba ndimke, ungahamba nam?
Usibona phi kwiminyaka emihlanu?
Ukuba intombazana ingacela inombolo yakho, ungamnika yona, hleze sihlukane?
Ukuba omnye wabahlobo bamndincwase ngaweungandixelela?
Ukuba omnye wabahlobo bakho okanye amalungu osapho akuxelele ukuba wohlukane nam ngenxa yokuba engandithandi, andithi?
Uziva njani malunga nosapho lwam kunye / okanye abahlobo?
Ungalungisa njani ukungaboni ngasonye nelinye lamalungu osapho lwam okanye abahlobo?
Lixesha elingakanani ocinga ukuba umntu ngamnye kuthi kufuneka alichithe nosapho / nabahlobo bakhe ngaphandle kweendibano ezifuna ukuba sibekhona sobabini?
Ubaxelela ntoni abahlobo bakho ngam xa ndingekho?
Ukuba omnye wabahlobo bakho wandincwasa ndaza ndakuxelela ngale nto, ubuya kuyenza njani?
Imibuzo ebalulekileyo ekufuneka uyibuze ngaphambi kokuHlala kunye
Ukuhlala kunye linyathelo eliphambili lokuya phambili nakoluphi na ulwalamano, ke ungangeni kuyo ungaboni. Iimpendulo zesithandwa sakho kweziukutyhila imibuzokufuneka ikuncede uqonde ukuba ngaba nobabini ninako ukuhambelana okusisiseko ngokwaneleyo ukuba nihlale kunye yonke imihla.
Ufuna ukuhlala kunye?
Ucinga ukuba niya kulungela nini ukuhlala kunye?
Siza kujongana njani nokuhlawula amatyala?
Ukuba siza kwehlukana, ngubani oza kuphuma?
Ucinga sizakuhlala ixesha elingakanani phambi kokuba sitshate?
Siza kuqinisekisa njani ukuba imisebenzi yekhaya yahlulwe ngokufanelekileyo?
Ngaba ucocekile, okanye ngaba uhlala ushiya iikawusi kunye nezinye izinto zilele kuyo yonke indawo?
Ngaba ucwangcise ukwamkela okanye ukuthenga isilwanyana kungekudala?
Ngaba ungakhe ucinge ukuba nabanye abantu ekuhlaleni ukunciphisa iindleko ukuba sinendawo enendawo eyaneleyo?
Siza kuqinisekisa njani ukuba umntu ngamnye uchitha ixesha yedwa xa besabelana ngendawo enye?
Ukuba kufuneka ndisebenze emva kwexesha ngokwenene, ngaba uya kuba nengxaki yokupheka okanye ukuphakamisa isidlo sangokuhlwa sobabini?
Ngaba uyasibona sitshata kungekudala?
Imibuzo ekufuneka uyibuze ngaphambi kokuzibandakanya
Ukuba ufikelela kwinqanaba apho nobabini nithetha ngomtshato, lixesha lokuba nixoxe ngemicimbi ephambili yobomi ngaphambi kokuba nithembisane. Ukubuza iqabane lakho le mibuzo yexesha elizayo kunokukusindisa kwintlungu yokuqhawuka komtshato okanye, okubi ngakumbi, uqhawulo-mtshato lwexesha elizayo.
Ngaba ufuna abantwana? Zingaphi?
Ufuna ukuhlala phi ixesha elide? Isixeko? Iintaba? Ilizwe?
Yintoni eyakhoizicwangciso zomhlalaphantsi?
Yintoni ifilosofi yakho ngemali emtshatweni? Ngaba eyakho yeyam, kungenjalo, okanye uya kukhetha iiakhawunti ezahlukileyo kunye nemeko yokuhlala nomntu ohlawula ityala?
Uziva njani ngokuthatha amalungu osapho ngexesha elinzima? Abazali abadala?
Yintoni oyithathayo ekwenzeni umsebenzi wasekhaya ukuba omabini amaqabane asebenza ngaphandle kwekhaya?
Zithini iingcinga zakhoindlela yokuqeqesha abantwana?
Ufuna ukuba ngutata onjani?
Ucinga ukuba ubaluleke kangakanani usuku lomtshato xa utshatile kwaye unabantwana?
Ngaba uvulekile kumbono wokucebisa ngomtshato?
Lixesha elingakanani ulindele ukuba umntu ngamnye kuthi abe nakho ukuxhoma kunye nabahlobo bethu xa sele sinabantwana?
Ngaba ungavuma ukuhlala ekhaya nabantwana ukuba umsebenzi wam sele uza kuqala okanye ukuba ndenze ngokwaneleyo emsebenzini ukuxhasa elo lungiselelo?
Siza kuzisebenzisa njani iiholide zethu?
Ngubani oya kuba noxanduva lokuhlola abantwana abahlala okanye umntwana?
Ngaba uyasindisa okanye uyagcina?
Ukuba iinjongo zethu zokuchitha / zokonga ziyahluka, siza kulalanisa njani?
Ngaba uyafuna umtshato omncinci, omkhulu, undwendwela inkundla, i-elopement, okanye awunawo umbono kwaphela?
Luthini uluvo lwakho ngamakhadi etyala?
Unamatyala angakanani ngoku?
Zithini izicwangciso zakho zokuphuma ematyaleni okanye ukuhlala ngaphandle kuwo?
Ungathini xa ndinokuxelela ukuba ndinamatyala amakhulu?
Ungasixhasa isigqibo sam ukuba ndiyafuna ukubuyela esikolweni ngenye imini?
Ungayiphatha njani xa ufumanisa ukuba umntwana wethu unesifo esibuhlungu okanye isifo?
Ngaba ucinga ukuba uvavanyo lwangaphambi kokubeleka lweziphene ezithile zokuzalwa okanye ukuphazamiseka kufuneka kwenziwe? Ubuya kusabela njani kwiindaba ezimbi?
Ucinga ukuba yintoni indima yomntu ngamnye emtshatweni?
Ngaba uya kukulungela ukuthatha imisebenzi emibini okwethutyana ukuba yile nto ithathe imali?
Ngaba wanelisekile ngokwasemoyeni nangokwesondo kubudlelwane?
Lithini uluvo lwakho ngoqhawulo-mtshato?
Ukuba ndingagula nyhani kukugula ixesha elide, ngaba ubuya kuhlala undikhathalele?
Ukuba ndinokungavumelani nelinye lamalungu osapho lwakho okanye izihlobo, uzakundimela?
Sebenzisa Oko Ukufundileyo
Zama ukungatsibeli nakusiphi na isigqibo esikhawulezileyo ngexesha leziqendu zemibuzo neempendulo. Endaweni yoko, thatha usuku okanye ezimbini ukujonga iimpendulo zakhe kwaye uthathe isigqibo sokuba ufuna phiubudlelwaneukuhamba. Cinga ngento ebalulekileyo kuwe malunga nolwalamano lwakho lwangoku. Ngelixa ungazukufuna ukuba iimpendulo zakhe zikhethelwe yena ngaphambi kwexesha, uya kufuna ukucinga ngohlobo lwempendulo ongathanda ukuba akunike. Cinga ukuba ngawaphi amanqaku angenakuthethathethana, kwaye yeyiphi na imicimbi ovumayo ukulalanisa kuyo. Ukuba ufumanisa ukuba iimpendulo zakhe azihambelani nezakho rhoqo kunoko, unokufuna ukunciphisa ilahleko yakho kwangoko. Ewe zihlala zikhona iindlela zokulalanisa xa umntu ebaluleke kakhulu kuwe.
Izinto Zokuthambisa Brands Ukuhlela Tips Malunga Iindawo Zokuhlala Ne Memorials Oonodoli Ne Zinto Izilwanyana Ekhaya Mortgages
Icoceka njani i-oveni
ungathatha i-tylenol pm xa ukhulelwe
yintoni ookhadinali uphawu
yeyiphi kwezi zilandelayo oya kuba ngumhlaba ofanelekileyo wokulima igadi?
ingakanani ikati e-avareji inobunzima obungakanani?